हरिण मार्दा सलमान गए ५ वर्ष जेल, केही सिक्ने कि नेपालका नेता र न्याय संरचनाले ? - Everest Dainik - News from Nepal
हरिण मार्दा सलमान गए ५ वर्ष जेल, केही सिक्ने कि नेपालका नेता र न्याय संरचनाले ?
बलात्कार गर्नेहरुलाई अनुसन्धानको प्रतिवेदन नआउँदै अदालतले रिहा गर्छ भने न्याय नपाएर मानिसहरु आत्महत्या गर्न विवश बन्ने घटना नेपालमा
२०७४, २२ चैत्र बिहीबार
काठमाडौं, निकै विवादित र चर्चित मामिलामा बलिउडका सबैभन्दा चर्चित र लोकप्रिय अभिनेता सलमान जेल गएका छन् ।
सलमान खानमाथि कालो हरिण मारेको आरोप प्रमाणित भएपछि उनलाई पाँच वर्ष जेल सजाय तोकिएको हो ।
सलमान खान, भारतका नेतादेखि नेपालमा समेत कैयन् युवाहरुको मनपर्ने नायक । रियालिटी शो ‘बिग बोस’मा सलमानको प्रस्तुतका लाखौं फ्यान छन भने उनले खेलेका सबैजसो फिल्महरु सुपरहिट छन् ।
तर कानुनका अगाडि यो सबै व्यक्तित्वले कुनै अर्थ राख्न सकेन ।
आज भन्दा २० वर्ष अघि “हम साथ साथ हैं” नाम चलचित्रको छायांकनका क्रममा उनले कांकाणी गाउँमा कालो हिरण मारेको आरोप लागेको थियो ।
२० वर्षको लामो लडाईपछि सलमान खानले आफूलाई निर्दोष साबित गर्न सकेनन् ।
जोधपुरको स्थनीय अदालतले गरेको यो फैसलालाई उच्च अदालतमा चुनौती दिने सम्भावना नभएको होइन, तर यो फैसलाले न्यायपालिकाले धर्म, जात, लिंग, पेशा र प्रभावभन्दा पर रहेर न्याय दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई झनै बलियो बनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस 'ट्युबलाइट' ले लगायो वितरकलार्इ चुना
यो घटनामा सलमान खानसँगै जोडिएका थिए कलाकार सैफ अलि, सोनाली बेन्द्रे, तब्बु र निलम । अरु सबै भने दोषि ठहर्याएनन् । सलमान खानलाई पाँच वर्ष जेल र दश हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।
र, हामी यता वारिपट्टिका छिमेकी नेपाली ।
हामीकहाँ ‘मोष्ट वान्टेड’ भनेर प्रचार गरिएकाहरुलाई जनताले जिताउँछन, उनीहरु निर्धक्क संसद भवन छिर्छन र हत्या आरोपी मानिएका र जेलमा रहेका आरोपीहरुलाई गृहमन्त्रीले जुस पिलाउँछन् । बलात्कार गर्नेहरु अनुसन्धानको प्रतिवेदन नआउँदै रिहा हुन्छन् र राजनीतिक दल प्रवेश गर्छन् । आन्दोलनका नाममा गरिने हिंसालाई राजनीतिकरण गरिन्छ र त्यसले उन्मुक्ति पाउँछ ।
याे पनि पढ्नुस जसका कारण सलमान जेल गए
कसैको नाम नलिउँ, तर नेपालमा अपराधको राजनीतिकरणको लामो श्रृंखला रहेको छ । अर्कोतर्फ यसमा मिसिएको न्यायालयमा राजनीतिकरण । जसले गर्दा बलात्कारी, चेली बेचुवाहरु, हत्या गर्नेहरुले राजनीतिक संरक्षण पाएका हुन्छन् भने सोझा साझा जनता अन्यायमा परेका हुन्छन् ।
बलात्कार गर्नेहरुलाई अनुसन्धानको प्रतिवेदन नआउँदै अदालतले रिहा गर्छ भने न्याय नपाएर मानिसहरु आत्महत्या गर्न विवश बन्ने घटना समेत नेपालमा रहेका छन् ।
सलमान खानले कालो हरिण मारेका हुन । दिनहुँ जसो हजारौं पशुहरुको धर्मका नाममा बली दिइने भारतमा एउटा जंगलमा डुलिरहेको हरिण मार्नु ठूलो कुरा नहुन सक्थ्यो । तर पनि सलमान खानको प्रभाव र उनको सेलिब्रिटी स्टाटसले यो न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सकेन ।
अझ २० वर्ष लामो यो कानुनी लडाईंमा कैयन् साक्ष्य र प्रमाणहरुसँगै सलमानले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्ने कोशिस समेत नगरेका होइनन् । तर उनी दोषी ठहरिए ।
याे पनि पढ्नुस संसारकै मोटी महिलालाई चाहियो सलमान खान !
भारतीय न्याय प्रणाली राम्रो भन्न खोजेको होइन । त्यहाँ पनि न्यायालयबाट आम जनताले न्याय नपाउने कुरा सामान्य नै हो । र कतिपय अवस्थामा न्यायालयले आफ्नो गरिमा बचाउने गरेको छ । यस्तै घटना हो सलमान खानमाथिको फैसला ।
न्यायपालिका भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा स्वतन्त्र निकाय हो, यसले अन्य दुबै निकायका काम र कारवाही कानुनसम्मत भए नभएको चेकजाँच गर्नुपर्दछ । न्यायालय नै प्रभावित भए आम जनताका लागि गुहार्ने ठाउँ कतै पनि हुँदैन ।
विगतमा जे भएपनि अबको समाजवादी यात्रामा न्यायालय पनि साँच्चिकै समाजवादी बन्नैपर्ने आवाज अहिले सर्वत्र उठेको छ ।
ट्याग्स: court, Salman khan
प्रेमिकाले राखी लगाइदिएपछि प्रेमीले गरे आत्महत्या
जाजरकोटमा सुत्केरीको मृत्यु
पुनः लकडाउन !
होशियारीपूर्वक मनाइँदै गाईजात्रा
नेपाल बैङ्कले पनि ह्वात्तै घटायो ब्याजदर, ऋण लिनेलाई फाइदै फाइदा
कोरोनाको भारतमा नयाँ रेकर्ड